Mabhuku 8 akanyorwa mukutapwa | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku 8 akanyorwa mukutapwa
Alberto Makumbo | | Updated on 25/11/2016 17:17 | Literature, dzakawanda
Isabel Allende, mumwe wevanyori vane mukurumbira vakatapwa vezana ramakore rechiXNUMX.
Isabel Allende akambotaura kuti «eMutapwa anotarisa mune zvakapfuura, achinanzva maronda ake; mutorwa anotarisa kune ramangwana, akagadzirira kushandisa mikana yaanowana. " Kubva pane chirevo ichi, pfungwa dzenyika yekunyora nezve kutapwa dzakasiyana, asi chokwadi chiripo ndechekuti: kugara kure nenyika yako sechinhu chisina kukodzera panorama inobvumira munyori kuti ave nemaonero akakura ezvaakasiya, ku tizira kune imwe nyika kwaunobva kuti nyaya izivikanwe. Vazhinji vanga vari vanyori vakasiya iyo Argentina, iyo Spain kana iyo Nigeria vachitsvaga hupenyu huri nani, vachiita izvi zvekusingaperi Mabhuku 8 akanyorwa mukutapwa.
1 Iyo Divine Comedy, naDante Alighieri
2 Les miserables, naVictor Hugo
3 Ngano Yemhuka, naJuan Ramón Jiménez
4 Ngano, zvinyorwa uye nyika yeAfrica, naWole Soyinka
5 Imba yeMweya, naIsabel Allende
6 Pamberi pehusiku Falls, naReinaldo Arenas
7 Kunge tsoka yeshiri iri mudenga, naHéctor Bianciotti
8 My Morocco, naAbdelá Taia
Iyo Divine Comedy, naDante Alighieri
Mushure mekushora Upapa mukufarira Emperor uyo akafungidzira chiono chake cheItari yakabatana, Dante akatapwa kubva kuFlorence uye akatongerwa kugara muutapwa muna 1302. Uye kunyangwe zuva chairo rakanyorwa richiri kusazivikanwa, zvinofungidzirwa kuti mumakore ekutanga ehutapwa Dante akanyora chikamu Iyo Divine Comedy, yechinyakare yezvinyorwa zvepasirese uye poindi yeshanduko pakati pemakore ekumavirira neRenaissance yaifungidzirwa kuti munyori akanyora chiratidzo chake cherufu neupenyu hwapashure.
Les miserables, naVictor Hugo
Munyori weWedu Mukadzi weParis haana kumbobvira afarira shanduko dzakasimudzirwa naNapoleon III, ndosaka akaendeswa kuBrussels uye, gare gare, kuchitsuwa cheJersey, muChirungu Channel. Pakati pemakore makumi maviri, munyori akabata pamuviri Zvinoshungurudza, iyo yakaburitswa muna 1862. Inofungidzirwa seimwe remabasa makuru ezana ramakore rechiXNUMX, Les Miserables inosanganisira shanduko yakaitwa neParis mumakore iwayo kuburikidza nezvematongerwo enyika, hunyanzvi kana kuvaka.
Ngano Yemhuka, naJuan Ramón Jiménez
Lorca aisakwanisa kusvika pakuzviudza, Machado haana kukwanisa kugara padhesiki rekunze uye Alberti akatarisana nematambudziko mazhinji kuti abve kuSpain achishungurudzwa neHondo Yenyika. Nezve Jiménez, munyori akakwanisa kusvika kuWashington nekupotera mukunyepedzera kwaaizobata mumapeji emabasa akadai seA Animal de fondo, iro basa raakaumba iro «Kuda uye kushuvira Mwari»Waakabvunza kwehupenyu hwake hwese.
Ngano, zvinyorwa uye nyika yeAfrica, naWole Soyinka
Iyo yakare (uye inosuruvarisa) nyaya yemunyori wemuAfrica: kupikisa simba rekunze, kunyora nezvezvibodzwa zveruzhinji rwakaipa, uye kupedzisira wave mutirongo Munyaya yeNigerian Soyinka, munyori wekutanga wemuAfrica kugamuchira mubairo weNobel weMabhuku muna 1986, kutapwa kwake kwakatora mwedzi makumi maviri nemaviri uye kutapwa kwake kwakaitika muna 22, iro gore raizoratidza chiratidzo chekutanga chenguva yake yekusika. Kunyangwe paine chokwadi chekuti pane mashoma mabasa anowanikwa muSpanish nemunyori uyu (paAmazon iwe unowana Kufambisa mune crypt), chinyorwa chake Ngano, Zvinyorwa, uye iyo Nyika yeAfrica inoramba iri iro rekona rekona rebhaibheri rake.
Nyaya yemhuri munguva dzeChile inotambudzika yatinoziva tese nhasi yakagamuchirwa naAllende a January 8 we1981 mushure mekutanga kunyora tsamba kuna sekuru vake vane makore zana okuberekwa, achangofa uye abatwa pasi peudzvanyiriri hwaPinochet. Kubva ipapo, Isabel Allende haana kungova mumwe wevane simba vechiLatin mazwi ekunyora kubva pakutapwa, asi akagamuchira iro risingazivikanwe zuva raNdira senzvimbo yekutangira yeimwe neimwe yenhau dzake nyowani.
Pamberi pehusiku Falls, naReinaldo Arenas
Vanyori veungochani neCuba hazvina kumbove mubatanidzwa wakanaka, kunyanya sezvo hudzvanyiriri hwaCastro hwakakunda muma60. Severo Sarduy akazviziva paakashandura Paris kuita hwindo raichemera Cuba yemavara uye fusiyasi yaakasiya, La Novia, naAhmel Echevarría, akataura nezvenyaya dzerudo dzevane ngochani panguva yeGrey Quinquennium, nepo Arenas ndiye akabuda akanyanyisa. Mushure mekusvika muNew York mukutanga kwema80 uye kuzviuraya mu1990 mushure memakore akati wandei vachitambura neAIDS, munyori uyo Javier bardem akapa hupenyu muiyo bhaisikopo akanyora angangoita gumi mabhuku pakati pawo anoonekera nhoroondo yake yehupenyu husati hwawa husiku, iyo yakapera mazuva mashoma asati afa.
Kunge tsoka yeshiri iri mudenga, naHéctor Bianciotti
"Inopfuura kota yezana ramakore yakanga yapfuura ndisina kudzokera kunyika kwandakaberekwa kekutanga" ndiwo mutsara unotanga iwo mutsara webasa raBianciotti rakaburitswa muna 2000. Bhuku rine zvakawanda zvehupenyu hwevanhu uye mune iro munyori weArgentina anobvunza chimiro chekuzivikanwa, kana ichifanira kuve yakasungirirwa kunzvimbo yake yekuzvarwa kana iri mari yenzvimbo dzese dzawakagara. Panyaya yake, nzvimbo dzaakadzingira kubva kuPampas yake yekutanga muna 1955 dzaive Spain, Italy neParis. Bianciotti akashaya muna 2012.
My Morocco, naAbdelá Taia
Rakaburitswa muna2000, My Morocco inotaura nezve hunyengeri hwakavigwa mumitumbi, zvinonhuwira uye mhuri dzenyika kwakaberekerwa Taia, muimbi uyo muna 2006 akareurura ungochani hwake mumagazini yeTel Quel, zvichikonzera nyonganiso huru muMorocco. Nguva pfupi yapfuura, nyika yakawana zvikonzero zvakawanda nei uyu mugadziri wemufirimu uye munyori aizoenda kuzvitapa muEurope mushure mekugamuchira kudzidza kuGeneva.
Kumisikidzwa kana kwekuzvidira, hutapwa hwavepo kubva panguva dzekare, nevazhinji vafungi vakashurikidzwa nekutaura pfungwa inopesana nehurongwa. Varume vakashinga vakaita kuti zvikwanisike izvi Mabhuku 8 akanyorwa mukutapwa uve mabasa akasarudzika, nemaonero. Mune rwiyo kune hupenyu hwekare husingazombodzoka.
Ndeapi mamwe mabhuku akanyorwa mukutapwa aunoziva?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Mabhuku 8 akanyorwa mukutapwa
3 mareferenzi emabhuku evadi vemifananidzo venguva dzese
Mubvunzo iwoyo: Asi sei ndiri kuverenga bhuku iri?